रोनाल्डोलाई पहिलो सिरी ए टाइटल !! एलेग्रीका निम्ति ५ औ सिरी ए टाइटल - Experience Best News from Nepal
जारी सिरी ए फुटबल अन्तर्गत युभेन्ट्सले प्रतिद्वन्दी फ़िओरेन्टिनासंग टाइटल जितको पक्का गर्न खेलेको थियो । च्याम्पियन लिगबाट लज्जास्पद हार ब्यहोरेको युभेन्ट्सले यो सिजन सिरी ए टाइटल भने ५ खेल अगाबै हात पार्यो ।
पहिलो हाफको पहिलो ६ मिनेटमा नै फिओरेन्टिनाले इटालियन टाइटल दाबेदार युभेन्ट्स माथि अग्रता लिएको थियो भने पहिलो हाफ कै ३७ औ मिनेटमा एलेक्स सान्ड्रोको हेडरबाट आएको गोलले खेलमा बराबरी गोल हुन पुगेको थियो । फिओरेन्टिनाका निम्ति मिलेनकोभिचले गोल गरेका थिए ।
दोश्रो हाफको पहिलो ५३ औ मिनेटमा फिओरेन्टिनाका पेजेलाले रोनाल्डोको पासलाई आफ्नै पोस्टमा प्रहार गर्दै युभेन्ट्सलाई जित उपहार गरे ।
अन्तत रोनाल्डोले सिरी ए टाइटल जिताए । यस सिजनका निम्ति रोनाल्डो युभेन्ट्सका स्टार खेलाडी ठहरिए । एलेग्रीले युभेन्ट्सलाई ५ औ पटक सिरी ए टाइटल जिताएका हुन् । युभेन्ट्सले ३३ खेल खेल्दै ८७ अंक जोडेको थियो भने दोश्रो स्थानमा रहेको नापोलीको भने ६७ अंक मात्रै रहेको थियो ।
अपराजय यात्राको एकल बादशाह युभेन्ट्स पुन बिजयी, रोनाल्डोले गरे गोल र एस्सिस्ट !!
क्रिस्टियानो रोनाल्डोको ह्याट्रिकमा युभेन्ट्सले गर्यो एतिहासिक कमब्याक जित ??
त्यस कारण रोनाल्डोलाई पेनाल्ड़ो भनिन्छ !!